Akụkọ - Gịnị bụ njikọta ụwa niile
E nwere ọtụtụ ụdị njikọ, nke enwere ike kee n'ime:
(1) Ofu njikọ: Ọ na-bụ-eji na ebe ebe abụọ akụ a chọrọ ka a nditịm hiwere isi na ọ dịghị ikwu na-ewepu n'oge ọrụ. Ihe owuwu a dị mfe, dị mfe ịmepụta, na ntụgharị ọsọ ọsọ nke ogwe abụọ ahụ bụ otu.
(2) Ntughari na-ebughari: A na-ejikarị ya eme ihe na ebe abụọ ahụ nwere ndapụ ma ọ bụ ngbanwe nke ikwu n'oge ọrụ. Dịka usoro nke mwepụ na-akwụ ụgwọ, enwere ike kee ya n'ime njikọta na-agbanwe agbanwe na njikọta na-agbanwe agbanwe.
Ọmụmaatụ: Njikọ ụwa ọnụ
Njikọ ụwa ọnụ bụ a n'ibu akụkụ iji jikọọ abụọ akwara (na-akwọ ụgbọala aro na chụpụrụ aro) na dị iche iche usoro na-eme ka ha bugharia ọnụ na-ebunye torque. N'iji njirimara nke usoro ya, akwara abụọ ahụ anọghị n'otu axis, na njikọ abụọ ahụ ejikọtara nwere ike ịmegharị na-aga n'ihu mgbe enwere akụkụ dị n'etiti etiti ahụ, na torque na mmegharị nwere ike ịfefe ntụkwasị obi. Njirimara kasịnụ nke njikọta ụwa niile bụ na usoro ya nwere ikike ịkwụ ụgwọ angular, usoro kọmpat na arụmọrụ dị elu. Akụkụ agbakwunyere dị n'etiti etiti abụọ nke njikọta ụwa na ụdị usoro dị iche iche dị iche, n'ozuzu n'etiti 5 Celsius ~ 45 Celsius. Na nnukwu ọsọ na ike ibu nnyefe, ụfọdụ njikọ nwere ọrụ nke ichekwa, na-egbochi vibration ma melite arụmọrụ dị omimi nke shafting. Njikọ ahụ nwere akụkụ abụọ, nke jikọtara ya na ọdụ ụgbọ na nke a na-ebugharị. Igwe ike izugbe na-ejikarị arụ ọrụ na igwe arụ ọrụ site na njikọta.
Universal njikọ nwere a dịgasị iche iche nke bughi ụdị, dị ka: pin pin, ụdị mgbabere uzo, wdg; Ndị a na-ejikarị eme ihe bụ ụdị ụdị osisi na ụdị oghere bọl.
Nhọrọ nke njikọta ụwa niile na-ahụkarị ọsọ ntụgharị nke ntụgharị nnyefe achọrọ, nha nke ibu ahụ, ntinye nwụnye nke akụkụ abụọ a ga-ejikọ, nkwụsi ike nke ntụgharị, ọnụahịa, wdg, ma na-ezo aka na njirimara dị iche iche njikọ iji họrọ ụdị njikọ kwesịrị ekwesị.